Guddoomiyaha Gedo: Garbahaarey waa diyaar oo waa lagu qaban karaa Doorashada Golaha Shacabka BFS. | Dayniile.com
Home Warkii Guddoomiyaha Gedo: Garbahaarey waa diyaar oo waa lagu qaban karaa Doorashada Golaha...
Guddoomiyaha Gedo: Garbahaarey waa diyaar oo waa lagu qaban karaa Doorashada Golaha Shacabka BFS.
Degmada Garbahaarey ee xarunta Gobolka Gedo waxaa ka socda howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka Magaaladaas oo martigelineysa kuraas kamid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ee DG Jubbaland.
Maamulka Degmada Garbahaarey ayaa sheegay in si gaar ah ammaanka Goobaha doorashada ay ka dhaceyso loo sugay, Hay’adaha ammaanka ayaa howlgallo joogto ah kawada Xaafadaha Degmadaas.
Ciidamada ka howlgallada Degmada Garbaahey oo kala ah Booliiska Federaalka, Nabadsugidda & Booliiska AMISOM ayaa wadajir isaga kaashada xaqiijinta amniga sida Goobaha loo asteeyay Doorashada & meelaha ay ku shaqeynayaan Guddiyada Doorashooyinka.
Axmed Buulle Maxamed (Gareed) Guddoomiyaha Gobolka Gedo ayaa tilmaamay in wada shaqeynta Ciidanka Federaalka & kuwa AMISOM ay dhalisay xoojinta nabadgalyada Degmada Garbaaharey.
“Hay’adaha ammaanka waxa ay dedaal geliyeen nabadgalyada Degmada Garbahaarey, xaqiiqdii waan u diyaarsanahay Doorashada Golaha Shacabka BFS, Shaki kama qabno dhinaca Amniga oo waxaa heegan u ah Ciidanka Dowladda & Booliiska AMISOM oo ku sugan goobta loo asteeyay Doorashada, ilaa 6-kun oo Ergo ayaan fileynaa in Garbahaarey tagaan waxaana u nahay diyaar” Sidaasi waxaa yiri Guddoomiyaha Gobolka.
Khilaafka Madaxda Federaalka & DG Jubbaland ee arrinta Gobolka Gedo ayaa lagu go’aamiyay in xubno ka socda Dowlad-Goboleedkaas ay tagaan Degmada Garbahaarey si ay u qabtaan Doorashada qaar kamid ah Kuraasta Golaha Shacabka.
Ma jiro mas’uul ka socda DG Jubbaland oo tagay Degmada Garbahaarey, halka maamulka ay u magacawday Dowladda Federaalka uu sheegay in aanay aqbali doonin wafdi ka taga Kismaayo in uu tago Xarunta Gobolka Gedo taasi oo dhaawac ku ah heshiiska laga gaaray hab maamulka Doorashada Degmadaas.
Previous articleMadaxweynaha Maamulka Puntland oo magacaabis sameeyay
Next articleDagaalkii Guriceel kadib, Ahlusunna maxaa u qorshaysan